Nhoroondo yeIndonesia | Kuwedzera kweZvapupu zvaJehovha
Zvapupu zviri kuparidzira pamusika muJakarta
Vatungamiriri vemachechi anozviti ndeechiKristu pavakanzwa kuti Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvabvumirwa kunamata zvakasununguka, vakarwadziwa zvisingaiti. Vafundisi nevakuru vakuru vanopfuura 700 vemachechi 7 akabuda muRoma, vakaita musangano muJakarta kuti vakurudzire hurumende kuti ibhane zvakare basa reZvapupu. Asi hurumende haina kuzviteerera.
Mashoko ekuti Zvapupu zvasununguka kuita basa razvo paaipararira munyika yese, vakawanda vaifarira chokwadi vakanyorera hofisi yebazi vachikumbira mabhuku kana kuti kudzidziswa Bhaibheri. Muna 2003, vanhu vanopfuura 42 000 vakapinda Chirangaridzo. Nhamba yevaparidzi vemunyika yacho yaipinda kaviri munhamba iyi pachitosara vamwe. Vanhu vanoda kusvika 10 000 vakapinda gungano rakaitwa muJakarta, kusanganisira mumwe mukuru mukuru aiva nechinzvimbo chepamusoro weDhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero. Mukuru mukuru wacho akashamiswa achiona vakuru nevadiki vachitarisawo magwaro aitaurwa, mumaBhaibheri avo. Akaudza hama kuti achagadzirisa chete mashoko ekunyepa aitaurwa pamusoro peZvapupu zvaJehovha.
Kubvumirwa kwakaitwa Zvapupu kunamata zvakasununguka, kwakavhura mukana wekuti mamishinari adzoke kuIndonesia. Mamishinari akatanga kudzoka aiva Josef naHerawati Neuhardt * (vakabva kuSolomon Islands), Esa naWilhelmina Tarhonen (vakabva kuTaiwan), Rainer naFelomena Teichmann (vakabva kuTaiwan), uye Bill naNena Perrie (vakabva kuJapan). Kwakazouyawo mamishinari ainge achangopedza chikoro cheGiriyedhi ayo akanzi anoshumira kuNorth Sumatra, Kalimantan, North Sulawesi, nekune dzimwe nzvimbo dzaiva kure nemaguta.
“Ndainakidzwa chaizvo nekubatsira vadzidzi kuti vavandudze madzidzisiro avo nehurukuro dzavo.”—Julianus Benig
Muna 2005, hofisi yebazi yakaronga kuti paitwe zvikoro zviviri zvesangano. Mumwe murayiridzi weChikoro Chokudzidzisa Vashumiri (chava kunzi Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo), anonzi Julianus Benig akati, “Ndainakidzwa chaizvo nekubatsira vadzidzi kuti vavandudze madzidzisiro avo nehurukuro dzavo uyewo kuti vakwanise kuita zvakawanda musangano.” Vakawanda vevakapinda chikoro ichi vava kushumira semapiyona chaiwo kana kuti vatariri vematunhu. Hama dzakawanda dzakapinda Chikoro Chevatariri Vanofambira * dzakanga dzatanga kudzidziswa maitirwo ebasa panguva yakanga yakabhanwa Zvapupu. Chikoro ichi chitsva chakavabatsira kuti vaite basa ravo sezvo Zvapupu zvakanga zvisisina kubhanwa. Ponco Pracoyo, uyo akapinda kirasi yekutanga akati: “Chikoro ichi chakandibatsira kuva munhu anonzwira vamwe tsitsi uye kuti ndinyatsoita basa rangu semutariri wedunhu. Chainakidza uye chakatikurudzira!”
Basa Raida Kukurumidza Kuitwa
Mumakore 25 akanga akabhanwa basa reZvapupu muIndonesia, ungano dzakawanda dzainamatira mudzimba. Ungano shoma ndidzo dzaikwanisa kuvaka Imba yoUmambo, uye zvainge zvisiri nyore kupiwa mvumo yekuvaka dzimba dzekunamatira. Nekuwedzera kwaiita vanhu muungano dzakawanda, hofisi yebazi yakaita kuti pave neDhipatimendi Rokuvakwa kweDzimba dzoUmambo (rava kunzi Dhipatimendi Remapurani Nokuvaka) kuti vanhu vawane pekunamatira.
Imwe yenzvimbo dzakatanga kubatsirwa nechirongwa chitsva ichi chekuvaka yaiva Nias Island iri kuNorth Sumatra. “Patakanzwa kuti taizovakirwa Imba yoUmambo, takafara zvekufara zviya,” anodaro Haogo’aro Gea, uyo ava nenguva refu achipinda neungano yeGunungsitoli. “Hofisi yebazi yakatumira hama 7 dzaizotungamirira basa rekuvaka. Imba yacho yakapera kuvakwa muna 2001.” Imwe hama inonzi Faonasökhi Laoli iri mudare rekuvaka remunzvimbo imomo, inoti: “Taimbonamatira mudzimba dzehama, uye vanhu vaitarisira pasi Zvapupu zvaJehovha. Asi patakangopedza kuvaka imba yedu yoUmambo, vanhu vanopinda misangano vakawedzera kubva pa20 kusvika pa40. Mumwedzi 12, nhamba yacho yakawedzera nekakapetwa kashanu. Munzvimbo yese, imba yedu yekunamatira ndiyo yakanaka kupfuura zvivako zvemamwe machechi, uye vanhu vava kuremekedza Zvapupu zvaJehovha.”
Imba yoUmambo yemuBandung
Muna 2006, hama dzakatanga kutsvaga nzvimbo yekuvakira Imba yoUmambo yekutanga muguta reBandung, kuWest Java. “Zvakatora mwedzi 12 kuti tizowana nzvimbo yakanaka yekuvakira imba yacho,” anodaro Singap Panjaitan, mumwe mukuru aiva mudare rekuvaka. “Asi kuti vakuru vakuru vatipe mvumo, paidiwakuti vanhu 60 zvichienda mberi vemunharaunda yacho vasiri Zvapupu, vabvumirane nazvo. Vanhu 76 vakabvumirana nazvo, kusanganisirawo mumwe mukadzi aimbotishora. Imba yacho payakanga yapera kuvakwa, takakoka vavakidzani vedu nameya wemuBandung kuti vauye kuzoiona. Meya wacho akati, ‘Kuchena kwakaita nzvimbo ino ndiko kunofanira kutevedzerwa nemamwe machechi ese.’” Imba yoUmambo iyi ine nhurikidzwa, yakatsaurirwa muna 2010.
Kubvira muna 2001, Dzimba dzoUmambo dzinopfuura 100 dzavakwa muIndonesia, asi pachiri kudiwa dzimwe dzakawanda.
^ ndima 3 Nyaya youpenyu yaHama Herawati Neuhardt iri muMukai! yaApril 2011.
^ ndima 1 Iye zvino chava kunzi Chikoro Chevatariri Vematunhu Nemadzimai Avo.
Indonesia: Basa Rinoramba Richienderera Mberi